पेट किन बढ्छ? कसरी घटाउने? « Sudoor Aaja
३० आश्विन २०७८, शनिबार ०९:१४
सुदूर आज ३० आश्विन २०७८, शनिबार ०९:१४
आहार, विहारसँगै विचार पनि ठीक हुनुपर्छ। रिस, चिन्ता क्रोध, मोह, लोभ प्रतिस्पर्धा आदि भावले शरीरमा नराम्रो प्रभाव पार्छ जसले पाचनमा गडबडी भई कब्जियत, पेट बढ्ने र अन्य समस्या आउँछ। त्यसैले विचार उचित हुनुपर्छ। – सेतोपाटी
काठमाडौं- मौसम परिवर्तन हुँदा रोग लाग्‍ने डर हुन्छ। जाडो मौसममा बिरामी हुने जोखिम पनि कैयौं गुणा बढ्छ। यो मौसममा रुघाखोकी, उच्च